Dib-u-kormeerka Gudaha Tiknoolajiyada Buckshot
Weynaan had iyo jeer ma fiicna.
Tusaale ahaan sharraxaad sharaxan 'subkoofer' ah. Iyada oo qayb ka ah nidaamka masraxa guriga, waxba maaha inay saqafka ka dhigaan sida afeefnaanta beedka leh oo leh wax badan oo ku dhufo yar. Laakiin baaskiilka? Uma maleynayo in saaxiibkeen, inkasta oo aan hubo in uu jeclaan lahaa inaad aragto isku day.
Mar labaad, marar badan oo ka mid ah kuwa ku hadlaya wireless-ga ah maalmahan waxay noqon kartaa mid aad u jilicsan in lagu xiro baaskiil. Dadyoowga doonaya inay wataan baaskiil ama dibadda u soo baxaan iyo marka ay soo bandhigayaan dabeecadaha dabeecadda ama dadweynaha oo dhan si ay u jecel yihiin Barry Manilow, Dibadbaxa Tijaabadu waxay dejinaysaa baqshadihii Bluetooth ee Buckshot sida doorasho suuragal ah. Rugged iyo iswaafajinta kaliya 3 ½ inch dheer, Buckshot waa nooc 'sida Justin Bieber leh gadhka lumberjack istaahila, marka laga reebo sida aan u dhegaysan dhegaha. Ilmaha, ilmaha, ilmaha, oh, runtii.
Naqshadeeda, Buckshot waxay u socotaa qaab cylindrical kaas oo wakhti dheer oo harag ah ka badan kuwa hadalku sida Divoom Bluetune Solo . Tani ma aha oo kaliya inay fududahay in la xakameeyo, laakiin sidoo kale waxay u fududahay in lagu xiro baaskiilkaada adigoo ku dhejinaya suunka. Dibedda sidoo kale waxay leedahay muuqaal dheeman oo ku yaal dusha sare ee gunta si aad uhogasho fiican iyo badbaado dheeraad ah. Wixii folks oo doonaya badbaado badan, Buckshot waa IPX5, oo bixiya xaddi gaara oo ka ilaalin biyaha iyo boodhka. Tani waxay ka dhigan tahay inay tahay mid u adkeysaneysa biyaha, inkastoo aan loogu talagalin in lagu qubo biyo sida ECOROX ka badan ECOXGEAR . Waa shoog aan loo adkeyn, inkastoo, taas oo keenaysa in ay ku noolaadaan dhibcood ama xitaa xannibaad ka baxsan dhul dareen leh, taas oo u egtahay in ay dhacdo hal dhibic ama mid kale si qalabka aad marwalba u qaadato.
Qalab kale oo loogu talagalay Buckshot waa awood ujuuri siman, taas oo u ogolaaneysa in loo isticmaalo xayirrada sansiga leh qalabka wax ku oolka ah ee Bluetooth. Isku-duubidda iPhone, iPad ama qalabka Android waa wax fudud. Kaliya taabo oo ha qabsan badhanka midabada illaa inta uu iftiiminayo, ka dibna raadi Buckshot liiska qalabka ku yaala telefoonkaaga ama kumbuyuutarka ee kuxiran barta kumbuyuutarka. Range mar mar la wadaago waa mid aad u wanaagsan 30 cagood. Nolosha batterigu sidoo kale waa ku filan tahay ilaa 16 saacadood. Bixinta waxaa lagu sameeyaa adigoo isticmaalaya fiilooyin USB ah, laakiin maaddaama uu afhayeenku isticmaalo qalabka microUSB ee caadiga ah, waxaad isticmaali kartaa fiilooyinka cabsida ee qalabyada sida Samsung Galaxy ee taleefannada. Si aad uhesho dekedda lagu soo dallaco, si fudud u soo jiid daboolka difaaca.
Marka lagu daro micno-dhajis, Buckshot waxaa loo isticmaali karaa adeegga bilaashka ah ee gacanta oo mar kaliya lagu duubo. Waxa kale oo uu leeyahay kontaroolo badan oo la dhisay, oo u oggolaanaya dadka isticmaala in ay si gooni ah u hagaajiyaan mugga si fiican u ciyaaraan, haka tagaan ama iska boodaan. Dhawaaqa laftiisu waa ku fiicanyahay af-hayaha. Sida hadalku yar yahay, saameynta foomka Buckshot waxay u baahan tahay waxoogaa dhinacyo ah marka la eego tayada maqalka. Maqnaansho sida firfircoon ee Cambridge Audio Minx 100, sidaas darteed muusikadu waxay noqon doontaa mid ficil ah. Riixidda mugga heerarka sarreeya ama adigoo adeegsanaya app EQ si ay u soo saaraan saldhigga sidoo kale waxay keenaysaa dhalanrog.
Hase yeeshee, taasi waa koorsada koorsada marka ay timaado kuwa ku hadlaya yaryar iyo Buckshot waxay si fiican u qabtaan marka loo eego kuwa kale ee tartamaya. Xaqiiqda ah inay ku xirantahay awoodda Bluetooth iyo labalaab ahaan ahaanshaha telefishinka ayaa ah mid lagu daray. Kadibna waxaa jira awooddooda adag. Adiga oo ah mid u adkeysanaya, shooga adkaysi u adkaysanaya iyo boodhka, afhayeenku wuxuu haystaa badbaado ka fiican kuwa badan oo ku hadla kuwa kale.
Guud ahaan, $ 50 Buckshot waa qiimo fiican oo la siiyay dhammaan sifooyinka uu leeyahay. Haddii aad raadinayso hadal hadal ah oo firfircoon oo aanad ka taxadarin hoyga, waxaa jira fursado fiican oo halkaa jira. Laakiin haddii aad qiimeyso karti-gelinta iyo sidoo kale dib-u-noolaanshaha dibedda ee ku-xigeenkaaga, ka dibna Buckshot waa qiimeyn u egtahay.
Qiimaynta ugu dambeysa: 4 xiddigood oo 5 sano ah
Wixi dheeraad ah oo ku saabsan kuwa ku hadla xarkaha, hubi inaad eegto kulankeena Kulanka & Kuleylka Kulanka.
Dib-u-eegga Dib-u-eegaha SMS1
NAD Viso HP-50 Dib u Eegista Kulanka
10-tii ugu fiicnayd ee kulaylka ah ee lagu iibsado sannadka 2018 ee ka hooseeya $ 50
Master & Dynamic MW50 Bluetooth 4.1 Kuleylka Kuleylka ah ee Kuleejka ah
Dib u eegid: Dhagax-Dhexdhexaadiyaha Wareegga Waxyaabaha Kala Duwan ee loo yaqaan "OrigAudio"
Barnaamijka Iska Ilaali Macalimiinta Kumbuyuutarrada kala duwan leh "xhost"
Sidee loo Bixiyaa iPhone oo aan Macquul aheyn
Fahmitaanka Faa'iidooyinka Koontada Skype ku-meel-gaarka ah
Sida loo rakibo Windows 8 ama 8.1 Laga bilaabo USB Device
Waa maxay muraayadda "dhaqso"?
Hagaha GPS Trackers ee baabuurta
Waa sidee Big iPad? Intee Ayuu Tahay Miisaankiisa?
Haddii aad xirto kombiyuutarka marka aan la isticmaalin?
Sida loo kala qeybiyo Screen ee Excel
Sida loo qaabeeyo khariidadaha iyo hanuuninta si ay u daabacaan Windows Mail
Fikradda: Farsamada Taageerada Taageerada (ATP)
'Tilmaamaha Maareynta Shaqada Sims'
Sida loo kala-tago Email-qaatayaasha Fareeyaa si sax ah
Sidee looga fogaanayaa Kaarka Deynta ee Kaarka Deynta?
7 Miisaaniyadeedka ugu wanaagsan ee Miisaaniyada Gamashadda ee lagu iibsado sannadka 2018
Maxay tahay MP4 File?
Qodobka 8aad ee Qormada iPad ee Qaababka kala duwan
Kalluumeysiga kaararka iyo Spear waa caadi ahaan shamil xun
17ka Xbox One Apps Best
5 Apps sida Snapchat leh Featers Tracking Faceers